« Tongava, ry Tompo tsara fo ! » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
FIAVIANA I B
Iz 63, 16b-17. 19b ; 64,2b-7. 1Kor 1, 3-9. Mk 13, 33-37.
Manomboka amin’ity Alahady ity ny vanim-potoanan’ny Fiaviana (Avent). Manomboka miaraka amin’izany koa ny taona litorjika vaovao (Taona B) izay hamakiana isan’Alahady ny evanjely araka ny nosoratan’i Md Marka. Herinandro efatra iomanana amin’ny fankalazana ny Noely ny fotoanan’ny Fiaviana. Fotoana izay iantsoana ny Kristianina « hiambina, hivavaka » hatrany, mankalaza ilay Fiavian’ny Tompo voalohany, dia ny fahaterahany izany, fa miomana ihany koa amin’ilay Fiaviany faharoa, dia ny Fiaviany amin’ny andro farany izany ; ilay fotoana tsy fantatra « na ho hariva, na ho misasakalina, na ho maneno akoho, na ho maraina ». Eo am-piandrasana izany fotoana tsy fantatra izany indrindra no amerimberenan’ny kristianina ny tonombavaka hoe : Tongava, ry Tompo tsara fo !
« Mitandrema, miambena, ary mivavaha » hoy Jesoa tamin’ireo mpianany. Oharin’i Jesoa amin’ny fahatongavan’ny lehilahy iray niverina avy nivahiny ny fiaviany. Nomen’ity lehilahy ity fahefana ny mpanompony, nanankinany andraikitra ny mpiambina ny tanàna, ambara-piveriny. Jesoa Kristy no Ilay Mpivahiny nandao ny fonenany, ity Tranobe iombonana ity, saingy mbola hiverina. Niala teto amin’izao tontolo izao Izy, tamin’ny fiakarany any an-danitra, ary manentana ny mpianany sy ny olona rehetra mba hiambina : « izao lazaiko aminareo izao dia lazaiko amin’ny olona rehetra koa : Miambena ». Inefatra miantoana no miverimberina ny teny hoe « miambena » eto amin’ny evanjely… Mbola ho avy indray Izy ka manantena ny olombelona ho tratrany miambina, miandry ny hiverenan’Izy Tompo ka hamerimberina ny tonombavaka hoe : Tongava, ry Tompo tsara fo !
Tsy ho mpanompo rendremana fa hanandratra tonom-bavaka tahaka ny nataon’i Izaia ihany koa hanao hoe : « Ry Tompo ô !… Miverena, noho ny fitiavanao ny mpanomponao sy ny foko lovanao ! » (Vakiteny voalohany). Hanandratra tonom-bavaka toy ny nataon’ny mpanao salamo ka hiventy hoe : « Ry Andriamanitry ny tafika o, miverena, mitsinjova avy any an-danitra » [Sal 80 (79),15]. Tsy ho mpiambina resin-tory anefa fa « miandry amim-pitokiana ny fisehoan’i Jesoa kristy Tompontsika », satria mahatoky Andriamanitra izay niantso antsika hiray amin’ny Zanany dia i Jesoa Kristy Tompontsika, hoy Md Paoly (vakiteny faharoa). Haharitra hivavaka mamakivaky ny alin’ny fisedrana maro samihafa, hahatsiaro tena fa mpanota ka mila famonjena mba ho mpanota-voavonjy. Hanandratra tononkira hanao hoe : « Mesia sy Mpamonjy, tongava faingana aminay hitondra ny fiainana, avia, avia re… Aoka Ianao handrovitra ny lanitra ka hidina ety aminay ». Tongava, ry Tompo tsara fo !
Tompo ô, asainao miambina izahay, mba ho vonona hitsena Anao amin’ny andro hiavianao ; mahangoly anay anefa ny fahaosanay sy ny haizina arakotry ny fahotana, koa ampio izahay tsy ho rendremana sy tsy ho resy fa ho vonona handresy ny fahotana hatrany. Tongava, ry Tompo tsara fo !